Himalaya Dainik » कहाँ गुमनाम छन् ‘गिर्वाणी-सुरंगना’ ?
कहाँ गुमनाम छन् ‘गिर्वाणी-सुरंगना’ ?
२०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार ह-त्याकाण्डमा बाँचेका गोरख शमसेरसँग धर्मपत्नी श्रुतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिनो केही छन् भने श्रुतिको कोखबाट जन्मेका दुई छोरी गिर्वाणी र सुरंगना राणा छन् । १९ जेठ ०५८ को दरबार ह-त्याकाण्डमा हजुरबा–हजुरआमा, मामा र आमासमेत गुमाएका यी दुई नानीहरू त्यसयता चाहिँ गुमनामप्राय: छन् ।
उनीहरू सञ्चारमाध्यमबाट बिलकुलै टाढा छन् । सामाजिक–सार्वजनिक कार्यक्रममा विरलै देखिन्छन् । उनीहरू यति धेरै अलगावमा छन् कि, गोरखका निकट पारिवारिक सदस्य पनि गिर्वाणी र सुरंगनाबारे बताउन असमर्थ छन् । दरबार ह-त्याकाण्डका बेला भर्खर तीन वर्ष पार गरेकी श्रुति–गोरखकी जेठी छोरी गिर्वाणी यतिबेला १९ वर्ष पुगिसकेकी छन् भने सिर्फ सात महिनाकी सुरंगना पनि १६ वर्ष पार गरिसकेकी छन्।
आमा श्रुतिसहित दरबार ह-त्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका शाही परिवारका अन्य सदस्यको तस्बिर देखेपछि गिर्वाणी भावुक बनिन्, आँसु झारिन् ।
राजा वीरेन्द्रका चिकित्सक समेत रहेका डा खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले ०६९ जेठमा काठमाडौँमा फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरे । प्रदर्शनीमा राजा वीरेन्द्र र शाही परिवारसँग सम्बन्धित तस्बिर थिए । डा श्रेष्ठको निम्तो स्वीकार गर्दै श्रुतिको चिनोका रूपमा रहेका दुई छोरीका साथ गोरख बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिल पुगे । आमा श्रुतिसहित दरबार ह-त्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका शाही परिवारका अन्य सदस्यको तस्बिर देखेपछि गिर्वाणी भावुक बनिन्, आँसु झारिन् । उनले आँसु झार्दै गरेको तस्बिर भाइरल नै भयो ।
आफूले समेत देख्न नपाएका श्रुतिका तस्बिरहरू देखेपछि भावुक त गोरख पनि बने । तर, अभिभावकीय दायित्वका कारण आँसु खसालिरहेका छोरीका अघिल्तिर रूने छुट उनलाई थिएन । आँसु दबाउँदै प्रदर्शनी हलबाट बाहिरिए,। त्यसयता गिर्वाणी र सुरंगना सार्वजनिक रूपमा देखिएको भनेको अघिल्लो साल १९ जेठमा नारायणहिटी दरबारअगाडि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हो।
उनीहरूलाई पढ्नका लागि किन नेपालबाट भारत लगियो त ? आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने आग्रहका साथ गोरखका एक निकट नातेदार भन्छन्, “दरबार ह-त्याकाण्ड र श्रुतिको निधनसम्बन्धी प्रसंगलाई गोरख बिर्सन चाहन्छन् । त्यसैले, छोरीलाई प्रेसले नभेट्टाओस् र त्यो प्रसंग सुन्नु नपरोस् भनेर नै उनीहरूलाई भारत लगिएको हो ।”
(यो बिषेस सामाग्री हामीले २०७५ माघको नेपाल म्यागजिनबाट लिएका हौ)
६५ बर्ष पहिलाको त्यो दक्षिण कोरिया, हेर्नुहोस ३० तस्बिर !
सर्वाधिक कमाउने अभिनेताः ड्वेनदेखि अक्षयसम्म, कसको कमाइ कती ?
सुनको भाउ हालसम्मकै धेरै घट्यो
फोक्सोमा क्यान्सर देखिएपछि अभिनेता संजय दत्त अमेरिका प्रस्थान
नेपालीहरुको गाली खाएका ७ बलिउड स्टार [तस्बिरसहित]
पाेखरामा खतराको घण्टीः एकै परिवारका ९ जनामा कोरोना पुष्टि